माधव नेपाललाई २३ 'सांसद'ले मात्र सघाए, को-को(सूचिसहित) ? Bizshala -
काठमाण्डौ । विपक्षी दलहरुको नेतृत्वमा आज सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका २३ सांसदले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसरी हेर्दा नेपालको पक्षमा एमालेका २३ निवर्तमान सांसद मात्र देखिएका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी राष्टपति कार्यालयमा पेश भएको दाबीपत्रमा भने २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । केही सांसदले आफ्नो हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएका थिए ।
विपक्षी दलहरुको नेतृत्वमा एमालेको नेपाल समूह समेतको साथ र सहयोगमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश माग्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो । माधव नेपाल समूहका निवर्तमान ३ सांसदले साथ छाडेसँगै रिटमा १४६ जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको छ ।
नेपाललाई कुन कुन निर्वतमान सांसदले मात्र साथ दिए त ? हेर्नुहोस् रिटमा हस्ताक्षर गर्ने एमाले नेता(निवर्तमान सांसद)हरुको सूची: